रंगशाला निर्माणपछि पैसा मागेर काम गर्दिन: सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) – PathivaraOnline
Home > समाचार > रंगशाला निर्माणपछि पैसा मागेर काम गर्दिन: सिताराम कट्टेल (धुर्मुस)
admin February 1, 2020 समाचार, समाज	0
काठमाडौं । नेपालमै जनस्तरबाट बन्दै गरेकाे गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिरहेका कलाकार तथा सामाजिक अभियान्ता सीताराम कट्टेल धुर्मुसले रंगशाला निर्माण भए पछि अब पैसा मागेर काम नगर्ने बताएका छन् । पैसा मागेर काम गर्ने काम यो नै अन्तिम भएको सीताराम बताउँछन् । “अब उप्रान्त म मागेर कुनै पनि काम गर्ने वाला छैन । धुर्मुसले यस्तो किन भने भन्ने कुराकाे यकिन भने नभइसकेकाे जानकारी छ ।
यो अन्तिमपटकको अपिल हो,” केही दिन अगाडि पोखराका पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, “देशको लागि केही गर्ने भन्ने इच्छा चाहना सबै नेपालीको लागि छ । यो अवसर र मौका हो ।” निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको लगानी ३ अर्ब रहेको छ । प्रति व्यक्ति १०० रुपैयाँ दिए पनि पुग्छ । तर उनलाई यति बेला लगानी जुटाउन पटपक पटक अपिल गर्दै आएका छन् ।
“अहिले मेरो दिमागमा रंगशालाबाहेक केही छैन । उठेदेखि नसुतेसम्म मेरो दिमागमा रंगशाला मात्रै छ, मलाई कसैले डाइभर्ट गर्न सक्दैन, सुत्दा पनि म रंगशालाकै विषयमा कसैले कम्प्लेन गरेको सपना देख्छु,” उनले भने । सीताराम आफ्नो चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’को नाफाको ५० प्रतिशत सोही रंगशाला निर्माणमा लगानी गर्दे बताउँ आएका छन् । रामबाबु गुरुङको निर्देशन रहेको चलचित्र फागुन ९ गते रिलिज हुँदै छ । चलचित्रमा सीताराम मुख्य भूमिकामा छन् ।
यो पनि पढ्नुसः कारागारमा के गर्दै छन् महरा ? को-को जान्छन् भेट्न ?
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा जबर्जस्ती करणीको अभियोगमा करिब तीन महिनादेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। कात्तिक २५ गतेदेखि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका उनलाई भेट्न जानेहरूको लर्को नै लाग्ने गरेको छ। उनलाई भेट्न आउनेहरू प्रायः जनमानसमा परिचित र शीर्षनेताहरू होलान् भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ। तर उनलाई भेट्न सामान्य कार्यकर्ता र आफन्तबाहेक भिआइपी भने जाँदैनन्। ‘अरू कैदीलाई भेट्न फाट्टफुट्ट रूपमा भए पनि शीर्ष नेताहरू आइरहेका हुन्छन्,’ कारागार प्रशासनका एक कर्मचारीले भने, ‘तर महराज्यूलाई भेट्न शीर्ष नेताहरू कोही नआएको देख्दा अनौठो लागेको छ।’
राज्यको पाँचौं वरीयताका व्यक्ति जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा जेल चलान भएको यो नै पहिलो रेकर्ड हो। त्यसकारण पनि महराले अप्ठेरो महसुस गरेको जनाइएको छ। कारागार स्रोतका अनुसार महरा स्वयं पनि बाहिरी व्यक्तिसँग भेट्न रुचि राख्दैनन्। कारागारका कर्मचारीले ‘कस्तो छ ?’ भनेर सोध्दा उनी टाउको हल्लाएर ठीक रहेको संकेत गर्ने गरेकाे खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
नागरिक दैनिककाे अनुसार कारागारभित्र महराको बिहान ६ बजेदेखि दैनिकी सुरु हुन्छ। उठ्नेबित्तिकै उनी केही बेर ओछ्यानमै योग गर्छन्। एकछिन हातपाखुरा र जिउ तन्काएपछि कारागारकै कम्पाउन्डमा चार/पाँच फन्को मार्छन्। लगत्तै तातोपानी, चिनीबिनाको चिया र रोटी, फलफूल आदि खान्छन्। उनका लागि प्रायः घरबाटै खानेकुरा आइपुग्छ। बिहान ९ बजेतिर पत्रपत्रिका पढ्न पुस्तकालय छिर्छन्। १० बजे खाना खान कोठाभन्दा बाहिरपट्टि कुर्सीमा आउँछन्। कहिलेकाहीं भने कारागारभित्रकै क्यान्टिनमा खान्छन्।
कोठामा छिरेर केही बेरको आरामपछि उनी ११ बजे आगन्तुक भेट्न र घाम ताप्न बाहिर निस्कन्छन्। दिउँसो २ बजे आफन्तसँगै खाजा खान्छन्। त्यसपछि ५ बजेसम्म कोठाबाहिरै बस्छन्। साँझ परेसँगै खाना खाएलगत्तै उनी सुगर र प्रेसरको औषधि सेवन गर्छन्। महराले आफ्नो सिरानीनजिक केही पुस्तक राखेका छन्। उनी आफन्त नआएका बेला किताब र पत्रपत्रिका पढ्छन्। बेलुकी ९ बजे उनको सुत्ने समय हो।
साउदीको ५५ डिग्रीको घाममा दु:ख गरेका पतिलाई धोका दिएर सुन र पैसा लिएर परपुरुषसँग भागेकि प्रमिला छुट्दैछिन्
नेपालकै इतिहाँसमा सावित्रा एक्लैले पाँच गाेल गरेपछि भारत सात-शून्यले पराजित
टुँडीखेलमा सेनाले तोप पड्काउँदा विश्वको सातो गयो, नेपालले शक्ति देखाउँदा सारा दुनियाँको यस्तो हालत…(हेर्नुहोस् भिडियो)